Kugqame uqhekeko kweyezitabane | isiZulu
Kugqame uqhekeko kweyezitabane
Kuzohlangana izitabane zodumo kwehlelwe yiTheku
Kuthiwa azigqamile kahle izitabane zabesimame kuleli
Ingqophamlando ‘izitabane’ ziqabulana okokuqala kokamabonakude
Durban - Kugqame ukudideka nokungaqondani engqungqutheleni yokuhlanganisa umphakathi okubalwa nophila impilo yabathandana nobulili obufanayo ebihlelwe wuMasipala weTheku, eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre.
Kule ngqungquthela ebubheke kakhulu kwabaphila impilo yokuthandana nobulili obufanayo, kugqameukuthi kabahlangene, kabaqondani bebodwa, kabazwani abanye badidekile.
Le ngqungquthela ibihlose ukuhlanganisa izitabane nabantu abangaziqondi kahle futhi kube nokuqondana ngempilo eziyiphila njengoba kusekhona abazicwasayo kwesinye isikhathi ezinye zigcina ngokubulawa.
Isikhulu sikaMasipala weTheku uThembinkosi Ngcobo ophethe uMnyango wezamaPaki, ezokuNgcebeleka, amaCiko namaSikoobekungumnyango wakhe obuhlele le ngqungquthela, uthi ukuqaphelile ukungahlangani kwabo njengoba bebesho izinto ezingafani.
OLUNYE UDABA: Kuzohlangana izitabane zodumo kwehlelwe yiTheku
"Abanye ngithole ukuthi banenkinga negama elithi izitabane, abanye bakhululekile ngalo. Noma ukhuluma isilungu amagama afana nohe/she bazizwa ngezindlela ezahlukene," kuveza uNgcobo.
Unanele ngokuthi njengoMaipala bazophinde benze eney ingqungquthela labo abaphila le mpilo bazohlangana bebodwa badingide baphume sebekhuluma ngazwi linye.
"Uma besasho izinto ezahlukene ngempilo abayiphilayo- kuzoba nzima ukuthi nomphakathi ubaqonde. Siwumasipala sizibophezele ukuba sisebenzisane nabo ngoba sinezinhlelo abangabamba iqhaza kuzona ngakho siyafuna ukuba nomphakathi jikelele ubaqonde ukuze kuhlalwe ngokuzwana ngaphandle kokucwasana nokunye," kusho uNgcobo.
Uthi le ngqungquthela imvule amehlo ngendlela izitabane ezicabanga ngayo emiphakathini eziyakhele.
Uqhube ngokuthi kungakuhle futhi kube nezigungu lapho bezoyalana khona bakwazi ukuthi bazwane bebodwa ngoba kuvelile ukuthi kunabanye abangabafuni abanye.
UNgcobo uthe basazobheka usuku olungaba luhle babasize bahlangane.
"Labo asebekhulile kuhle bayale labo abasebancane nangendlela yokuziphatha njengoba kuphinde kwakhalwa ngokuthi kunabanye abangcolisa igama lezitabane emphakathini," kusho uNgcobo.
Le ngqungquthela ibihanjelwe yizitabane okubalwa uSomizi Mhlongo, uKhaya "GC" Dladla, uLwazi "Diva Cadach" Blose-Cele, uMfu Zenzi Zungu, uTha "Nontandakubukwa" Simelane.